Niteraka fatiantoka ho antsika Malagasy iny toe-javatra iny. Ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fahatrarana ny fenitra araka ny tokony ho izy eo amin’izay sehatry ny fitaterana ana habakabaka izay no tena antony nahatonga ireny. Eo ny lafiny “sécurité” fa eo ihany koa ny lafiny “sureté”. Ankehitriny, asa na hadinon’ny tompon’andraikitra ankehitriny na toe-javatra tsy niainany ka toa manao zavatra mila hampiverina indray any anatin’ny « annexe B » izy ireo. Izany indrindra no mahatonga ireo mpiasa mitonona ho sarotiny amin’ny fiaroavana ny tombontsoan’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM), indrindra fa ny tombontsoa ambonin’ny firenena hanaitra ny sain’ny tompon’andraikitra hoe : « tsy ny fanavaozana no tsy ekena, tsy ny fanatsarana no lavina fa ny fialokalofana ao anatin’io teny io kanefa fihetsika mifanohitra amin’ny fenitra takina no aseho sy atranga ka tsy tantin’ny vavoninay ary isintonanay lakolosy fanairana ny amin’ny hoe tsy tokony hiverina amin’izany lalan-dratsy efa hita izany intsony isika. Ekena ny fanavaozana, fa raha misy ny famindran-toerana, fanoloana tompon’andraikitra dia aoka ho ny olona mahavita, mahafehy ny asa ampanaovina azy ary mahalala ny sehatra ampiandraiketina azy tokoa no hapetraka amin’izany fa tsy ny akamakama sy ny fifankahazoana manokana no hametrahana olona amin’ny andraikitra iray ». Araka ny fanononan’ireo mpiasa teknisianina manana traikefa azy eo anivon’ity orinasa natao hisahana ny lafiny fitaterana ana habakabaka ity eto amintsika dia tsy ny fahaiza-manao loatra na ny fahafehezana ny andraikitra ampisahanina no iaingana amin’ny famindrafindrana mpiasa amin’ny anjara toerany. Velom-panahiana ireo mpiasa eo anivon’ny ACM satria, tsy vitan’ny asan’izy ireo ihany fa ny fivelomany no ho voantohina raha rendrika tokoa io orinasa io fa ny tombontsoam-pirenena ihany koa mety ho tra-doza.